DF oo sheegtay in ay dileen 50 Al-Shabaab ah | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo sheegtay in ay dileen 50 Al-Shabaab ah
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dileen kudhawaad 50 askari oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
JOWHAR, Soomaaliya - Howlgal maalmihii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalku ka wadeen deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ayaa lagu dilay 50 ka tirsan kooxda Al-shabaab.
Taliyaha ciidanka xoogga General Odawaa Yuusuf oo la hadlayay Warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa sheegay in dagaal culus lala galay kooxda Al-Shabaab islamarkaana khasaaro xoog leh lasoo gaarsiiyay.
Taliye Odowaa ayaa tilmaamay goobaha ay ka dhaceen weerarrada, isagoo laba goobood oo kala ah Galka laba-shiir iyo Xaraare ay jab xoog leh ku gaarsiiyeen kooxda, waxa uuna sheegtay in ciidanka XDS ay guulo xoog leh ka gaareen weerarradaas, ma jirin wax khasaare ah oo soo gaaray dhinacooda sida uu Taliyuhu sheegayba!
Inta badan markii ay dhacaan weerarro udhaxeeya labada dhinac ayaa qolo waliba sheegataa in ay guulo ka gaareen, waxaana udambeysay dhacdadii ka dhacday Aw-dheegle oo ay labada dhinacba guulo kala sheegteen, iyadoo koox kasta ay soo bandhigtay sawirro muujinaya khasaaro ay ugeysteen dhinaca kale!